Sida Loogu Shaqeeyo Kaliya | Martech Zone
Sida Loogu Shaqeeyo Kali
Jimcaha, Agoosto 28, 2009 Douglas Karr
Qof kastaa wuxuu ka hadlayaa sida loo sameeyo hawlo badan I shalay waxaan wadahadal la yeeshay David oo ka socda Kheyraadka Shaqada ee Degmada Brown xarunta oo aan ka wada hadalnay hawl-qabasho keliya. Taasi waa… daminta taleefankaaga, barnaamijkaaga desktop desktop, xiritaanka emaylkaaga, dansiga digniinta - iyo dhab ahaan in xoogaa shaqo la qabto.
Waxaan leenahay mashquul badan, maalmahan, waxayna saameyn ku yeelaneysaa tayada shaqadeena.
Ma ahi taageere hawlo badan qabta. Shaqaalaha la shaqeeya ee shaqooyinka hore waxay xaqiijin doonaan xaqiiqda ah inaan ahay nin madax hoose ah. Waxaan jecelahay inaan helo gees, oo aan xoogga saaro waxa aan qabanayo, oo aan fuliyo. Waqtiyada qaarkood way ila soo kici jireen oo ay ka wada hadli lahaayeen mashruuc kale, waxaanan u eegi lahaa iyaga sidii zombie ly si dhib yar ayaan ku xasuustaa inay xitaa i weydiiyeen su'aal.
Gabadhaydu way jeceshahay tan, run ahaan… tani badanaa waa markay weydiisato ogolaansho inay sameyso waxyaabo aan dhihi karo maya. 🙂
Sikastaba… isku day! Haddii aad haysato Blackberry, shid aamusnaan (ha gariirin) oo miiska dusha ka rog si aadan u arki karin wajigiisa inuu ifo marka fariin cusub ay dhacdo. Haddii aad aadeyso kulan, taleefankaaga ugu tag miiskaaga oo xoogga saar kulanka. Haddii aad leedahay qol guddi fulineed ah kulan, kulankaas wuxuu galaafan karaa ganacsigaaga kumanaan doolar. Telefoonka dhig oo hawsha dhamayso!
Iskuday tijaabi usbuuca soo socda - ka jooji 2 ilaa 3 saacadood oo toos ah kaalandarkaaga Isniinta. Go'aanso mashruuca aad ku shaqeyn doontid. Albaabkaaga xir, dami dhammaan digniinta desktop-ka, oo bilow. Waxaad la yaabi doontaa inta shaqo ee aad ku guuleysan doonto.
Tags: xeeladaha emaylkasuuq-geynta suuqaKu Xidhan GudahaMySpaceSawirradaPodcasts
Warbaahinta Bulshada PR - Khataraha iyo Abaalmarinta
Macaamiisha Ma Iibsadaan Dhameystir Anymore
Agoosto 28, 2009 saacaddu markay ahayd 8:50 PM
Waxaad ilaawday hal talo hadii aad rabto inaad sameyso shaqo kali ah… ha isku dayin inaad howshaada ku qabato Koobka Bean!
Agoosto 29, 2009 saacaddu markay ahayd 12:31 PM
Waa adduunka hawlo badan, waana inaan sameyno maarayn waqti si aan dhowr hawlood u wada qabanno isla waqti isku mid ah. Sikastaba waad ku mahadsantahay wadaagida aragtidaada.
Aug 30, 2009 at 1: 16 AM
Talo aad u wanaagsan .. Waxaan u maleynayaa inaan maanta tijaabin karo casharrada guriga. Laakiin waan arkaa halka Emma Adams ka imanayo .. si dhib yar ayaan uga gudbi karaa fasalka aniga oo aan iska hubinin blackberry-ka.
Anyways, post weyn ..
Sep 1, 2009 at 3: 22 AM
Doug… Waxaan raadinayay farsamo wanaagsan oo hal-hawl ah waxaanan la kulmay mid fiican… Waxaan isticmaalaa farsamada Pomodoro ( http://www.pomodorotechnique.com/ ) markaan u baahanahay inaan diirada saaro sidii aan wax u qaban lahaa oo aan u baahdo inaan ku sameeyo waqti isku mid ah. Uma muuqan karo inaan adeegsan karo inta lagu guda jiro maalmaha laga yaabo inay shirarka ka buuxsamaan, laakiin markaan wax badan qabsado, waa farsamadii ugu fiicnayd ee aan soo helo nasasho. 25 pomodoros waxaadna qaadaneysaa 5 daqiiqo oo nasasho ah… Wax badan baan ku dhammeeyey anigoo adeegsanaya farsamadan….
Sep 8, 2009 at 1: 21 PM
Waad ku mahadsantahay qoraalkan weyn, runtii waxay igu kaliftay inaan ka fikiro… Waxaan daminaayay ogeysiisyada ku saabsan TweetDeck iyo Digsby si aan u ilaaliyo tirada jeedinta inta aan shaqeynayo.
Sep 14, 2009 at 2: 42 PM
Waan jeclahay sida aad u xustay inaad tahay sida zombie markii aad diiradda saarto hawl keli ah. Waxaan qoray qoraal ku saabsan Zombies iyo Farshaxanka Hawlaha Hal-abuurka ah.